Halkalı Gebze Marmaray Map Atụmatụ na Ntinye Akwukwo - RayHaber
01 / 03 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, Ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ okporo ígwè, General, Maps, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Turkey, VIDEO 0
Halkara gebze marmaray map na-akwụsị na edozi edozi
Halkalı Gebze Marmaray Map Ulochi di iche iche na obodo di iche iche: obodo ndi Istanbul na-echere obi uto, Halkalı Emere njem mbụ na Gebze Marmaray akara maka 10 March. A na-enweta akara ahụ na kilomita 185 Gebze- Halkalı Ụzọ n'etiti ga-ebelata ruo 115 nkeji. Gebze-Halkalı Ụmụ amaala na-achọpụta na ị ga-aga na-enweghị nkwụsị, awa 1 ga-ewepụta oge 10 oge.
N'ime ọrụ Marmaray, a na-emegharị ntanetị ndị dị n'èzí. Europe n'akụkụ Halkalı na Kazlıçeşme nakwa n'akụkụ Anatolian n'etiti Ayrılık Çeşmesi na Gebze. 1 nke oru ngo. A na-emeghe ụzọ a ga-esi na-agagharị n'etiti Kazlıçeşme na Ayrılıkçeşme.
Marmaray Halkalı Nweta Gebze
Obrascon Huarte Lain SA - Dimetronic SA Joint Venture nyere nkwekọrịta maka € 1.042.079.084,00. 76.6km ogologo, Gebze Pendik Ayrılıkçeşme- Sirkeci-Zeytinburnu-Bakırköy- Halkalı Mgbe oghere nke Marmaray, a ga-ebugharị ndị njem 75 puku na otu ntụziaka na 96 puku puku mmadụ ga-ebugharị kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ okporo ígwè na-agba ọsọ ga-akwụsị na ụfọdụ ọdụ nke 1.2, nke a na-eme atụmatụ iji 28 na-agba ọsọ kwa awa. Uzo a, nke a ga-ejiko ya na metro na tram na Istanbul mgbe agwusiri ya, ezube ime ka uzo ozo na ala E-43 di n'akuku obula nke obodo.
ỤLỌ NKE MARMARAY HALKALI-GEBZE LINE
NKWU NDỊ AHỤRỤ
Mgbe e meghere akara dum maka ọrụ;
Halkalı na ọdụ M1B Yenikapı-Halkalı eriri mita Metro, Ataköy ọdụ M9 İkitelli-Ataköy larịị, Bakırköy ọdụ M3 Bakırköy-Başakşehir metro line, Yenikapı ọdụ M1A Yenikapı-Atatürk Airport, M1B Yenikapı-Kirazlı na M2 Yenikapı-Hacıosman metro edoro, Sirkeci Kabaş ọdụ TX Uhie okporo ígwè ígwè na akara ụgbọ mmiri, M1 Kadıköy-Tuzla metro na Ayrılık Çeşmesi ọdụ ụgbọ mmiri, M4 Üsküdar-Çekmeköy metro line na Üsküdar ọdụ, M5 Göztepe-Ümraniye metro akara na Bostancı ọdụ, M12 Bostancı-Dudulik metro akara na Bostancı ọdụ, M8 Pendik-Sabiha Gökçen Airport metro line, İçmeler A ga - ejikọta ebe M4 na akara ntanetị nke Kadıköy-Tuzla.
Oge nke oge MARMARAY
ỤLỌ ỤLỌ NKE HALKALI GEBZE MARMARAY LINE
IETT mepee ohuru ohuru nke ejiri aka na Marmaray 28 / 01 / 2014 IETT mepee usoro ohuru nke ejikọrọ na Marmaray: 5, nke IETT tinye n'ime ọrụ tupu mmalite nke Marmaray, mepee akara ọhụrụ. Ngwunye ohuru 5 mepere site na IETT tupu mmalite nke Marmaray iji hụ na Marmaray na ndị njem ụgbọ okporo ígwè ndị ọzọ na-emeghe. E mepere oghere ọhụrụ site na òkè nke President Abdullah Gül na Prime Minista Recep Tayyip Erdoğan. İETT eguzobela ọgbara ọhụrụ ụgbọ ala iji hụ na njikọta nke Marmaray, nke jikọtara n'akụkụ abụọ nke ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri ahụ, na ndị ọzọ ụgbọ okporo ígwè ndị ọzọ. N'ịbụ nke dị na Anatolian na nke Europe nke eriri ahụ, isi iyi Ayrılık dị na Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı na ụlọ ọrụ Kazlıçeşme.
GTO President Nail Çiler, n'okwu ya na Mgbakọ ahụ, kwuru na ụlọ ọrụ Metro na Marmaray na Istanbul ga-ejikọta ya na Gebze wee weghachite okwu ahụ na ihe omume. 27 / 01 / 2012 Gebze Chamber of Commerce (GTO) mere nzukọ nzuko omeiwu nke January. GTO President ntu chilling nzuko omeiwu ya okwu "Ọ bụ ezie na Marmara region anyị ụlọ ọrụ bụ ọnụ ọgụgụ nke ndị nwere nkwarụ na-arụ ọrụ na-ntakiri. Dị ka ihe ọmụma anyị natara n'aka İşkur Gebze alaka 941 nke Disabled banyere ọrụ. Naa maka anyị ọnụ ọgụgụ nke ebe. Anyị na-atụ a ga-enwe afọ ojuju na-adịghị a ọnụ," ka o kwuru. Gebze Chamber of Commerce (GTO), na Assembly nyere ọmụma banyere ọrụ ha na-eme na 2011-ekwu okwu ná nzukọ ndị GTO President ntu chilling. N'izo aka General Council si Çayırova abled mkparita on Obodo ghọtara Çiler kwuru, sị: "Karịsịa na mkparịta ụka ndị nnọchianya nke Bulgarian Anyị chọrọ imeri ihe isi ike na visa agbala. Anyị ntá ego ...
Maka Ndoghachi nke Marmaray Suburban Line Halkalı Mgbagha malitere na line Gebze 25 / 06 / 2012 Aghaghachiri ntinye ederede n'èzí n'ime nnukwu ụgbọ njem Marmaray bụ nke ga-eku ume na Istanbul. Halkalı62 na-agbaso eriri 200 kilomita na Gebze na Istanbul, a ga-akwatu ọnụ ụzọ 60 nke ọnụ ụzọ 300. HalkalıSite Gebze inyịme na rụọ ọrụ ndị COMMUTER okporo ígwè na usoro ke Istanbul Marmaray Railway Bosphorus tube agafe dabeere na ngwa ngwa na-ewu na-aga n'ihu. Na başlandı.ilk ogbo na ghara ịgbanwe nke suburban edoghi n'ime oru ngo Gebze-Pendik n'etiti nationalized n'oge 22 kilometa akara 46 ụlọ, 11 ọdụ, 5 okporo ụzọ overpass, 8 okporo ụzọ ondapaas, 7 agafe osimiri akwa, 11 agafe agafe ondapaas na 5 agafe agafe bibie overpass. Gebze-Halkalı the tender for improving the suburban line anl
Na Marmaray Project Halkalı 105 nkeji si Gebze 01 / 04 / 2013 Na Marmaray Project Halkalı Minit 105 n'etiti Gebze 29 Mgbe e mepere ọrụ Marmaray n'ọnwa October, Halkalı - Gebze anya, 185 nkeji, ebe a ga-ebelata anya a ruo 105 nkeji. Site na Marmaray Project, Bakırköy - Bostancı ga - ewere 37 nkeji, Üsküdar - Sirkeci 4 nkeji, Söğütlüçeşme - Yenikapı 12 nkeji. Mgbe 29 mepere n'ọnwa Ọktoba, Halkalı - Gebze anya, 185 nkeji, ebe a ga-ebelata anya a ruo 105 nkeji. Na Marmaray Project, Bakırköy - Bostancı ga - ewere 37 nkeji, Üsküdar - Sirkeci 4 nkeji, Söğütlüçeşme - Yenikapı 12 nkeji. Isi: emlakkulisi.com
Marmaray Halkalı Mgbe mepee Gebze Line 11 / 11 / 2014 Marmaray Halkalı Mgbe ịmepee akara Gebze: Marmaray Halkalı Mgbe ịmepee Gebze akara bụ ihe ịchọ ịmata ihe. Lee na nkọwa niile Halkalı Nkọwa maka ọrụ Marmaray nke ga-ebelata oge njem n'etiti Gebze na 115 nkeji 5,5 kilomita Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme akara nke Marmaray, nke e nwetara site na itinye ego nke 13,6 ijeri TL, ka a na-arụ ọrụ na Ọktoba. Ugbu a ọ bụ 29 kilomita Halkalı Ná mmalite nke akara Gebze. Dị ka Habertürk si kwuo, nke ọma, Marmaray Halkalı Kedu mgbe oghe Gebze meghere? Kedu agbata ga-akwụsị? Halkalı Ebee ka Gebze Marmaray ga-akwụsị? Marmaray Halkalı A na-emepe Gebze ahịrị imeghe na 18 June 2015. Halkalı Gebze Marmaray ...
Marmaray Halkalı-Gebze Commuter Commuting Roads Amalite 18 / 09 / 2018 Gbanwe nsogbu nsogbu njem nke Istanbul Halkalı-Gebze dị nso na njedebe nke eriri obodo. Ụgbọ oloko malitere nyocha ha n'abalị. Na Turkey dị megacity nke Istanbul nke Marmaray mkpa njem oru ngo Halkalı-Bịbanye n'etiti mmalite nke ọrụ adịghịzi ụbọchị. MARMARAY TRAIN IN PENDİK Marmaray train running between Kazlıçeşme-Ayrılıkçeşmesi Halkalı- Ọ na-agba ọsọ abalị n'etiti Gebe. Foto nke ụgbọ okporo ígwè Marmaray nke Pendik na-akọrọ na mgbasa ozi ọha na eze kpaliri nnukwu obi ụtọ. ECHICHE RAIL OK Mgbe arụ ọrụ Marmaray Halkalı-Nke njikọ ụgbọ okporo ígwè nke ga-arụ ọrụ na-aga n'ihu n'etiti Gebze ugbu a. IZUZI SIGNALIZATION NA-AGBAZI Dịka a ga-echeta ya, na nso nso a, Marmaray 10 wagọn na igbe nke wagons
Halkalı-Gebze Marmaray ụgbọ okporo ígwè 43 Signposts 26 / 02 / 2019 Echere imeghe na March Halkalı-Gebze akara ngosi nke Marmaray nke 43 kwụsịrị, ụgbọ ala Marmaray malitere ime. Marmaray, nke ga-eme ka okporo ụzọ Istanbul dị jụụ, abịala ná njedebe. Na akara ahụ ezubere ka e mepee ya na March; HalkalıỌ ga-ekwe omume ịgagharị na Gebze ruo Gebze, na ọbụna High Speed ​​Train ga-apụ site na ọdụ ụgbọ elu dika Bakırköy na Bostancı. Ejirila Nkọwapụta 43 ECHICHE Halkalı43 kwụsịrị site na Gebze ruo Gebze. A na-egosiputa isi ihe na-ebufe na ngalaba nke Marmaray na-aga n'okpuru oké osimiri na akara ngosi nkwụsị. YHT STOPS INCLUS On the other hand, isi ihe na-adọta uche gaa na ihe ịrịba ama ...
Gebze - Halkalı Kedu mgbe a ga-emeghe Marmaray Line? 28 / 02 / 2019 Gebze - Halkalı Kedu mgbe Marmaray ga-emeghe? Ọrụ nrịba ama malitere na Gebze - Halkalı na-eche mgbe akara ga-adị. Marmaray ga - enye ọtụtụ nde ụmụ amaala ohere site na mmalite ya. Na Gibze-Halkalı Kedu mgbe a ga-emeghe Marmaray akara? Kedu ụbọchị? ebe a Halkalı-Gebze Marmaray kwụsịrị na nkọwa niile ... Ụgbọ njem bụ otu n'ime nsogbu ndị kachasị mkpa n'obodo nnukwu ma jupụta n'obodo dị ka Istanbul. N'ihi nke a, ndị nke Istanbul, ụdị ọrụ njem niile dị iche iche na-enyere ha aka ịbanye n'ọrụ na ụlọ ha ngwa ngwa
BTS dọrọ aka ná ntị "Gebze Halkalı Egwuregwu Marmaray adịghị njikere maka ịmalite! " 05 / 03 / 2019 Òtù Ndị Ọrụ Na-ahụ Maka Ọfịs na United Transport (BTS) taa (5 March 2019 Tuesday) "Emela Nhọrọ Amụma Marmaray! United Transportation Workers Union Istanbul 1 N'uba Alaka ụlọ na-agụ site President nke njikọ Hasan Bektaş pịa nkwupụta dị ka ndị a; "Istanbul Strait tube ịgafe Project maka Construction na Japan na 1999 mma site ọchịchị nke ngụkọta 41.8 nde Japanese yen ego nkwekọrịta aka n'etiti Turkey na 15 February 2000 Official Gazette nwekwara e bipụtara mmalite nke oru ngo. Marmaray Bosphorus tube agafe 13 on December 2001 nke oru ngo engineering ị nweta 14 March na 2002 gbasaa
Gebze Halkalı Kedu ógbè ndị ahụ na-eme njem na-agagharị na Marmaray?
Halkalı Gebze ụgwọ oge
Halkalı Gebze na-eme njem oge
Halkalı- Ụbọchị ịmalite ịgbanwuo ụda
Halkalı-Gebze Marmaray kwụsịrị
HalkalıMap nke -Gebze Marmaray
Halkalı-Gebze akara Marmaray
Oge Marmara na-aga
Map nke Marmaray
Osisi ndị dị na Marmaras
Gebze-Halkalı Nkọwa Ikpeazụ na Line Suburban
Taa na akụkọ ihe mere eme: 2 March 1891 A Belgian-French te
IETT mepee ohuru ohuru nke ejiri aka na Marmaray
Maka Ndoghachi nke Marmaray Suburban Line Halkalı Mgbagha malitere na line Gebze
Marmaray Halkalı Mgbe mepee Gebze Line
Gebze - Halkalı Kedu mgbe a ga-emeghe Marmaray Line?